Kenya oo kordhisay bandowgii Magaalada Mandheera oo maanta ku ekaa | Baydhabo Online
Kenya oo kordhisay bandowgii Magaalada Mandheera oo maanta ku ekaa
Dowladda Kenya, ayaa saddex bilood ku kordhisay bandowgii saarnaa Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya, xilli bandowgaasi uu maanta ku ekaa.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya, Joseph Nkaissery, ayaa 27-kii bishii October ku dhawaaqay bandow socon doono muddo laba bilood, si ay uga hortaggan weerarada Ururka Al Shabaab.
Bandowgan, ayaa si rasmi ah uga dhaqangalay Magaalada Mandheera 28-kii bishii October. Bandowga oo 12 saac ahaa, ayaa bilaabanaayay 6:30 maqribnimo, kuna ekaa 6:30 subaxnimo.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in bandowgii saarnaa magaaladaasi lagu kordhiyay muddo saddex bilood ah, iyadoona uu bilaabanayo 28-ka December, isla-markaana uu socon doono illaa 28-ka bisha March ee sanadka soo socda.
Wasiirka, ayaa sidoo kale sheegay in bandowgu uu saamaynayo Deegaanada Cumar Jilicow, Carabiya, Fiino, Lafey iyo Ceelwaaq Kenya. Dhammaanba deegaanadan waxay hoos-taggan Mandheera.
Joseph Nkaissery, ayaa qoraalka ku sheegay in dadka deegaanka looga baahan yahay in ay aqbalaan awaamiirtan cusub, si waafaqsan xaaladaha.
Kenya, ayaa xaalad deg deg ah gelisay magaalada xuduuda ku taala, ka dib weeraro xiriir ahaa oo ay Shabaabku ka gaysteen. Weerarkii ugu dambeeyay oo dhacay 25-kii bishii October, ayaa waxay Shabaabku ku dileen 12 qof, oo aan Muslim ahayn.
Bandowga la saaray Mandheera, ayaa yareeyay weeraradii Al Shabaab, balse waxaa uu culeys ku keenay Somalida deegaanka ah.
Dadku waxay ku andacoonayan in bandowgan uu saamayn ku yeeshay ganacsigii iyo noloshii caadiga ahayd ee magaalada ka jirtay. Sidoo kale waxaa ay ku cabanayan in bandowgu uu ka hor joogsaday in ay ku cibaadeystan Masaajida, xilliyada habeenkii.